काठमाडौं । बढैयाताल गाउँपालिका अन्तर्गतका सात सय पशुपालक किसानलाई २१ लाख ७७ हजार ७ सय ९८ अनुदान वितरण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशानलय प्रदेश नम्बर ५ को आर्थिक सहयोग तथा भगवती दुग्ध उत्पादक सहका...
काठमाडौँ । बुधबार नेपाली बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला ६२ हजार तीन सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ६२ हजार कायम छ । यसैगरी चाँदी प्रतितोला ७ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको पनि महासंघल...
काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारले समानुपातिक सांसदहरुलाई संसद् विकास कोषमार्फत रकम बाँड्ने भएको छ । संघीय सरकारको अनुशरण गदै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि प्रदेश १ सरकारले पहिलोपटक समानुपातिक सांसदहरुका लागि पनि संसद् विकास कोष निर्माण गर्न लागेका हो । आर्थिक मामिला...
लोकपथ संवाददाता जेठ २८, २०७६ | मंगलबार
काठमाडौं । सोमबार ओरालो लागेको कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज झिनो अङ्कले सुधार देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ० दशमलभ १७ बिन्दुले बढेर एक हजार २७५ दशमलभ ९८ अङ्कमा थामिएको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर मापन गर्ने से...
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाबाट इजीलिंक रेमिट्यान्सले सेवा आरम्भ गरेको छ । सिड्नीमा कार्यालय स्थापना गरेपश्चात कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त रेमिट्यान्सका ब्राण्ड एम्बासडर रवि लामिछानेको सहभागितामा कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकृत डि.पि. अर्याल, अष्ट्रेलिया रेमिट्यान्सका प्रबन्ध ...
राष्ट्र बैंकमा रिक्त पदमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले ५ जना कार्यकारी निर्देशकहरुको अवकाशपछि ४ जनालाई रिक्त पदका लागि बरिष्ठ निर्देशकबाट १ महिनाको लागि कामु कार्यकारी निर्देशक तोकेका छन् । कामु कार्यकारी निर्देशक तोकीएका ४ जनालाई काम गरिरहेकै विभागमा जिम्मे...
नेपालको बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एशियाकै नमुना : अर्थमन्त्री खतीवडा
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनापछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतीवडाले निक्षेप डुब्यो भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन् । मंगलबार कोष भवनको शिलन्यास गर्दै खविडाले निक्षेपको सुरक्षण गर्ने अवधारणा आएसँगै निक्षेप डुब्न लाग्यो भनेर कोहि पनि बैंकको काउन्टरमा धा...
सकियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे रिह्याब मर्मत
लोकपथ संवाददाता जेठ २७, २०७६ | सोमबार
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति ‘रनवे रिह्याब’ को मुख्य काम सकिएको छ । विमानस्थलको तीन हजार ५० मिटर लामो धावनमार्गको पहिलो चरणको कालोपत्र ‘पिच’ सम्पन्न भएको विमानस्थलले जनाएको छ । धावनमार्ग स्तरोन्नतिको...
काठमाडौं । शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ८ दशमलभ ७८ अङ्कले घटेर एक हजार २७५ दशमलभ ८२ अङ्कमा पुगेको छ । त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसम...
चुक्ता पूँजीको सत् प्रतिशत् हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दै जनउत्थान
काठमाडौं । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले असार १२ गते देखि चुक्ता पूँजीको सत् प्रतिशत् हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । वित्तीय संस्थाको हालको चुक्ता पूँजी संस्थाको २ करोड ८८ लाख रहेको छ । संस्थाको चुक्ता पूँजी सत् प्रतिशत् हकप्रद शेयर निष्काशनस...
निर्माण रोकिँदा ८ अर्ब फिर्ता !
काठमाडौं । काठमाडौ तराई तथा मधेस द्रुतमार्ग योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन स्वीकृत हुन ढिलाहुदा कामले सोचे जस्तो गति लिन सकिरहेको छैन । नेपाली सेनाले डिपिआर नभएको कारण उक्त मार्गको टनेल र पुलको ठेक्का सम्झौता गर्न सकेको छैन साथै अन्य धेरै प्राविधिक क...
जमीन बाँझो राख्ने किसानमाथि चर्को कर
लोकपथ संवाददाता जेठ २६, २०७६ | आइतबार
काठमाडौं । कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने व्यक्ती तथा कृषकलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगले उच्च कर लगाउने भएको छ । आयोगले गत साता महानगर, उपमहानगर, नगरपलिका र गाउँपालिकालाई पत्र पठाउदै यस्तो सिफारिस गरेको हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबै बजेट निर्माणमा जुटेका ...
काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ५७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको हो । ...
रत्ननगर । बजेट अभावले लामो समयदेखि रोकिएको भरतपुर विमानस्थलको धवनमार्गमा कालोपत्र थप्ने काम शुरु भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरणले उक्त विमानस्थललाई नौ करोड उपलब्ध गराएकाले १७ वर्षपछि धवनमार्गमा कालोपत्र थप्ने काम ‘ओभरले’ गर्न थालिएको हो । भरतपुर...
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पर्यटकीय जिल्ला लमजुङमा स्थानीय सरकारद्वारा एक मोटरेवल पुल निर्माण गरिएको छ । बेसीँशहर नगरपालिकाले नगरभित्र पक्की संचरना बनाउने अभियानअन्तर्गत बेँसीशहरको झ्याङखोलास्थित विद्या विकास विद्यालय नजिकै वडा नं ८ मा रहेको मोटरेवल पुल निर्माण...
रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट उद्योग शुरु, दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य
लोकपथ संवाददाता जेठ २४, २०७६ | शुक्रबार
हेटौडा । हेटौडा उपमहानगरपालिका १५ अवस्थित रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट उद्योगले स्वदेशी लगानीकर्ताबाट निजी क्षेत्रका लागि उत्पादन शुरु गरेको छ । प्रथम चरणमा दैनिक २० हजार बोहोरा उत्पादन गर्दे आइरहेको उक्त सिमेन्ट उद्योग १० अर्ब ५० लाखको लागतमा खडा...
काठमाडौं । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको काम लक्ष्यअनुरुप अघि बढिरहेको बताउँदै पुनःनिर्माण समितिले हालसम्म ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । असार मसान्तसम्ममा पहिलो तलाको काम सक्नेगरी काम तीव्ररुपमा भइरहेको जनाइएको छ । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण समितिका...
मेगा बैंकमा ४५ जनालाई जागीरको अवसर ! कुन- कुन पोष्ट खाली ?
काठमाडौं । मेगा बैंकले रिक्त पद पुर्तिको लागी विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले हालका लागि ४५ जना कर्मचारीको आवश्यक रहेको विज्ञापनले प्रष्ट पारेको छ । बैंकले एक जना ब्रान्च म्यानेजरका साथै अफीसर तहका लागि ३१ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । अधिकृत तहमा शाखाक...
लोकपथ संवाददाता जेठ २३, २०७६ | बिहिबार
रसुवा। नेपाल –चीनबीच रसुवागढी नाकामा नयाँ मितेरी पुल निर्माण भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा तथा राजश्व गस्ती २१ नं गुल्म टिमुरेका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक जीवन केसीका अनुसार नेपाल चीनको सिमाना रसुवागढीको ल्हेन्देखोलामा चीन सर...
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश नम्बर ६ को सरकारले आफ्नै एयरलाईन्स ल्याउने तयारी गरेको छ । बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ७६ ७७ को क्रार्यक्रम तथा नितीमा कर्णली एयरलाइन्स तयारी गरेको हो । यो क्षेत्र भौगोलिक रुपमा विकट हुनुका साथै सडकको सहज पहुँच उक्त प्रदेशमा छैन ...
<< Page2of 224 >>